KERE ANY ATSIMO: Tsy mbola vita ny ady, ilaina hatrany ny tolo-tanana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:22
Velom-pisaorana ireo mpiray Tanindrazana any Atsimo, noho ny fitsinjovana azy ireo.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/KERE ANY ATSIMO: Tsy mbola vita ny ady, ilaina hatrany ny tolo-tanana
Tsy tolo-tanana fohy ezaka no tena hahavonjy tsy hampisy io tsy fanjarian-tsakafo any atsimo io intsony, fa ny lavitr’ezaka, izay hahafahan’ireo mponina tratran’ny Kere miarina indray, miasa sy mamokatra ho an’ny tenany sy ny ankohonany, ary ny faritra misy azy. Maro ny ezaka efa nataon’ny Fitondram-panjakana, saingy ny fiaraha-mientan’ny rehetra ihany no mampanjary ny ady hamongorana ny Kere…
Stanislas R. 3 décembre 2020
Tsy mamela ny fanjakana hipetrapetra-potsiny amin’izao io tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ny Nosy io. Maro no efa vita, raha mbola betsaka no tokony tohizana sy hapetraka. Volana vitsivitsy izay no lasa, maro ny paikady nentina nanarenana ny fiainan’ireo mponina, na teo amin’ny ara-tsakafo izany, na teo amin’ny ara-piveloman’izy ireo amin’ny ankapobeny mihitsy. Napetraka tamin’izany ny vahaolana amin’ny fohy ezaka, izay nanarenana mihitsy ireo mponina trotraky ny hanoanana, nitsaboana ireo nararin’ny tsy fahampian-tsakafo io, ary nandraisana an-tanana azy ireo isan’andro mandraka androany. Iaraha-mahalala, anefa, fa tsy ho indroa mandry am-bavahady izao fanampiana amina fotoana voafetra izao, fa ny fanarenana azy ireo hiotra amin’ny fiainana, eo anatrehana fitaovana hatolotra, ka hivoaran’izy ireo tsy hiverenan’io tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo io intsony, no tena tanjon’ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana.
Hamafisina ny ezaka vita…
Tsy nihanona fotsiny tamin’ireo ezaka rehetra efa vita tany aloha, ny fitondram-panjakana, noho ny olana mbola ao an-toerana, mitady hanao fahirano ireo vahoaka ao Atsimo. Noho izany nanamafy ny ezaka efa natomboka ny fitondrana. Nahatsapa ny ezaka natao ireo mpiara-miombon’antoka vahiny, ka nanampy ara-bola, nialohavan’ny fivoriana niarahan’ny Filoha sy ny Banky iraisam-pirenena, vondrona Eoropeanina, ny PAM sy Usaid, ary ny Unicef. Voafaritra mazava tao anatin’izany ny asa goavana tanterahina, hametrahana ireo teboka manokana hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy fanarenana ara-tsakafo.
Maro ireo efa nahatsapa tena
Voin-kava-mahatratra tokoa no miseho any Atsimon’ny Nosy amin’izao io. Maro, araka izany, ireo efa nanolo-tanana, nanome tan-tsoroka nanao izay foiny, na olon-tsotra na vondron’olona sy fikambanana maro, hatramina mpamatsy vola avy any ivelany sy ny sisa. Vao tsy ela izay no nanome 2,5 tapitrisa dolara ny governemanta Etazonia, tamin’ny alalan’ny Unicef sy ny PAM, nentina nanampiana manokana ireo zaza latsaky ny 5 taona tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo io. Zaza mahatratra 64 000 no nokendrena tamin’ity fanampiana ity. Maro ireo tolotra sy fanomezana nandeha tany amin’ny faritra Atsimo, fa ny tena nampihetsi-po ny maro, dia ny fanetren-tena nasehon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, izay tonga nitondra fitiavana ho an’ireo mpiray tanindrazana. Ny fanaovana fitoeran-drano, ny fambolen-kazo toy ny legioma sy voankazo sy ny sisa, fitaovana maro toy ny « Lapel » sy « hertz », ary kifafa, ny masinina fanjairana ho an’ny vehivavy…
Raha tsiahivina tokoa mantsy, tsy honohono fa fijaliana no ateraky ny hain-tany any an-toerana, dia ny tsy fisian-drano sy sakafo, izay miteraka fahasahiranam-be sy fahafatesana mihitsy, ho an’ireo mponina. Ny biby fiompy tsy lazaina intsony fa mitsipatsipaka etsy sy eroa, noho ny tsy fisian’ny rano sy ny sakafony. Misy no nivaro-pananana mihitsy, nitsoa-ponenana, raha misy no tsy te hiala fa nizaka ny zava-misy. Distrika maherin’ny dimy no voakasik’ity « Kere » any an-toerana ity. Manoloana ireo ezaka nifarimbonana sy niara-nitontona, anefa, velom-panantenana sahady ireo vahoaka any an-toerana, ary mahatsapa fa tsy irery fa Malagasy iray ihany.
Ity fitondrana ity no nahavita namaha tanteraka ny olan’ny Kere.